Barnaamijyada lagama maarmaanka u ah sameynta sawir dijitaal ah | Abuurista khadka tooska ah
TOP 7 barnaamijyada lagama maarmaanka u ah sawirada dhijitaalka ah
Fran Marin | | Qalabka Naqshadeynta, dhowr
In kastoo loogu talagalay sawiro Laga soo bilaabo dugsigii hore ee usa wax la barbardhigi karaa ma aha in lala shaqeeyo warqad, qalin iyo aaladaha jirka sawirka dhijitaalka ah waa ay sii xoogaysanaysaa sanadihii u dambeeyay waxayna ku dhowdahay inay iskeed isu taagto tii soo jireenka ahayd. Awoodda weyn ee codsiyada sawirku leeyihiin maanta iyo fursadaha waaweyn ee ay bixiyaan ayaa ka dhigtay iyaga ilo aan laga maarmin u ah sawir-qaadaha maanta.
Maqaalkani waxaan ku sameyn doonaa dib u eegis kooban oo ku saabsan dalabyada barnaamijyada ee aan maanta ka heli karno inaan ugu shaqeyno si aad u macquul ah oo aan ku helno natiijooyin wax ku ool ah 100%. Ma isticmaashaa mid ka mid ah barnaamijyadan? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka!
2 Buug-gacmeedka Pro
4 Clip Studio Rinjiga
5 Rinjiraha Corel 2015
Haddii shaqo lagu abuuray ArtRage lagu aqoonsado wax, waa dhammaystirka gacanta oo leh codsi u dhigma. Tani waxay leedahay meel aad u wanaagsan waana taas mahaddeeda darteed waxaad awoodi doontaa inaad ku daydo qalab aad u tiro badan oo loo adeegsaday sawir dhaqameed. Wuxuu la jaan qaadayaa nidaamka OS-ga iyo Windows-ka oo lagu qiimeeyo $ 50.
Laga soo bilaabo guriga Autodesk, codsigan wuxuu ku siinayaa dhammaan qalabka aad u baahan tahay si aad u abuurto sawirro tayo sare leh iyo sawir gacmeedyo. Marka lagu daro haysashada maktabad ballaadhan oo burush ah, waxay leedahay tiro badan oo qalab ah oo awood u leh inay saameyn ku yeeshaan aragtida isla markaana bixiyaan animation. Waa luuqado badan waxayna leedahay qiimo kudhowaad 65 doolar, in kastoo dabcan ay leedahay nooc tijaabo ah oo bilaash ah.
Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan waxayna kuu oggolaaneysaa inaad abuurto majaajillo dijitaal ah. Waxay leedahay qalab aad waxtar u leh sida sheybaarada dhammaan noocyada rasaasta, goobooyin hadalka ah iyo qaabab dabiici ah oo shaqadaada siin doona 100% qaab xirfad iyo xirfadba leh. Waxay u taagan tahay haysashada aragti aad u macquul ah, wax ku ool ah oo la awoodi karo. Waxay bixisaa suurtogalnimada dhoofinta shaqooyinka qaabab kala duwan iyo fursado aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay tafatirka iyo dhoofinta. Waxay ku habboon tahay Windows iyo OS oo qiimaheedu waa $ 50 inkasta oo ay sidoo kale leedahay nooc bilaash ah oo 30-maalmood ah.
Clip Studio Rinjiga
Awoodda ay leedahay waxaa ka mid ah qalab taxane ah oo ka caawiya hagaajinta nidaamka shaqada iyo hagaajinta natiijada ugu dambeysa, sida xasiliyaha khadka tooska ah. Sidoo kale waa wax badan oo kala duwan maxaa yeelay qaabab dhaqameed kala duwan ayaa lagu dayan karaa iyada oo loo marayo noocyo badan oo burush ah. Ka mid ah xulashooyinka qaabeynta, waxay bixisaa arrimo iyo saameyn ku takhasusay naqshadeynta buugga majaajillada. In kasta oo lagu heli karo oo keliya Ingiriisi, haddana waxay leedahay laba nooc: Mid bilaash ah iyo mid qaali ah.
Rinjiraha Corel 2015
Aad ayey faa'iido u leedahay maxaa yeelay waxay ka kooban tahay labada qalab ee ugu habboon sawir-gacmeedka dijitaalka ah iyo dib-u-hagaajinta sawir ama sawir-qaadista. Tayadeeda iyo heerka xirfadeed ee ay bixiso mishiinkeeda iyo is dhexgalka ayaa istaagay oo ka dhigay mid aad caan uga ah bulshada naqshadayaasha adduunka oo dhan. Maaddaama aan daciif nahay, waxaa laga yaabaa inaan xusno qiimaheeda, oo gaareysa $ 400 oo laga yaabo inaysan qof walba heli karin.
Qalabka shaqadiisa waxaa ka mid ah burushyo ku dayanaya waxyaabo kala duwan sida acrylics, dhuxul ama buraash hawo. Waxay leedahay ikhtiyaarro habayn aan xad lahayn, sidaa darteed waxaad abuuri kartaa qaabab kuu gaar ah oo aad ku dabakhi kartaa buraashkaaga. Raaxo waa mudan in la xuso maxaa yeelay dhexdeeda wanaagsan waxay bixisaa suurtagalnimada in meertada meertada lagu wareejiyo inta lagu guda jiro hawsha shaqada si loogu muujiyo raaxo weyn. Waxay leedahay laba nooc, mid bilaash ah iyo mid qaali ah oo qiimahiisu yahay $ 29.
Waa barnaamij bilaash ah laakiin taasi macnaheedu maaha inaysan ahayn aalad awood leh oo awood u leh inay bixiso 100% natiijooyin xirfadeed. Waxay leedahay buraash aad u tiro badan oo u dhaqma si ka duwan oo awood u leh ku dayashada qalabka dhaqanka, in kasta oo aysan iyagu ku koobnayn. Waxay sidoo kale leedahay noocyo kaladuwan oo miirayaal wax ku ool ah iyo saameyn si loo bixiyo dhammaadka xiisaha badan. Waxaa loo heli karaa Windows, Linux, iyo Mac OS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » TOP 7 barnaamijyada lagama maarmaanka u ah sawirada dhijitaalka ah
SAI sidoo kale waa barnaamij wanaagsan !!! :)
Ku jawaab Roy
Waxaan sidoo kale kugula talin lahaa PaintTool SAI
10 talooyin oo loogu talagalay sawir qaadaha madaxbannaan
Sida loo helo midabka ka geddisan kan aan dooranay